Jona 2021 - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Isam-bolana: Jona 2021
Famerenana ny boky - Fanabeazana ho an'ny fandriampahalemana sy ny zon'olombelona: fampidirana
Jona 30, 2021 0
Ao amin'ny "Fampianarana ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny zon'olombelona: fampidirana", Maria Hantzopoulos sy Monisha Bajaj dia nanoratra lahatsoratra fampidirana tena tsara izay manitatra ny fahalalantsika ary miasa ho toy ny sehatra iray hanohizan'ireo mandroso sy mandroso mandroso amin'ny fandalinany sy ny fampiharana ny fandriampahalemana sy ny maha-olombelona fanabeazana momba ny zon'olombelona. [tohizo ny famakiana…]
"Protection Approach" mitady Programme UK sy Manager Manager (mifantoka amin'ny herisetra mifototra amin'ny maha-izy anao)
Ny toerana dia mitantana ny Protection Approach UK izay mifantoka amin'ny fanabeazana sy ny fandaharam-piarahamonina hiadiana amin'ny herisetra mifototra amin'ny maha-izy azy. Fe-potoana fampiharana: 4 Jolay. [tohizo ny famakiana…]
YIHR mitady manam-pahaizana momba ny fananganana fandriampahalemana sy ny fanabeazana (Kosovo)
Jona 25, 2021 0
YIHR dia mangataka ny manampahaizana manokana amin'ny fananganana fandriam-pahalemana sy fanabeazana hanohana ny hetsika Fampihavanana sy fanovana fifandonana (RCT) any Kosovo. Fe-potoana fampiharana: 16 Jolay. [tohizo ny famakiana…]
White House namoaka fanambarana manohana ny vehivavy, zazavavy ary vitsy an'isa Afghan
Jona 24, 2021 0
Izahay izay nanao sonia ny taratasy tamin'ny filoha Biden dia nanentana ny fanampiana sy antoka ho an'ny vehivavy Aghan mba hampidirina ao anatin'ny fizotran'ny fisorohana ny tafika amerikana avy amin'ny firenena dia miarahaba ity fanambarana avy amin'ny White House ity. [tohizo ny famakiana…]
Ny Sesame Workshop dia mitady ny Senior Director, International Education
Jona 22, 2021 0
Ny Sesame Workshop dia mitady hanakarama Tale Senior, Fanabeazam-pirenena. Izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fahaiza-manao ara-teknika, ny fahaiza-mitarika ary ny fahitana amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao fototra ho an'ny ankizy na amin'ny lafiny fampandrosoana na amin'ny krizy. [tohizo ny famakiana…]
Fikarohana momba ny fandriam-pahalemana sivily no mitady manam-pahaizana manokana momba ny fampianarana momba ny fandriam-pahalemana any Okraina Atsinanana
Jona 18, 2021 1
Ny programa nasionalin'ny Serivisy ho an'ny fandriam-pahalemana (CPS) dia natao hanohanana ny fandresen'ny polarities sosialy any Atsinanana Okraina amin'ny alàlan'ny fepetra fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana. Fe-potoana fampiharana: 8 Jolay 2021. [tohizo ny famakiana…]
Fampianarana fandriam-pahalemana amin'ny fampiharana - fampianarana an-tserasera maimaim-poana avy amin'ny Service Civil International
Ny Service Civil International dia manolotra fampianarana fampianarana an-tserasera fandriam-pahalemana maimaimpoana ho anao hahafantaranao tsara ny atao hoe fandriampahalemana sy ny fomba fandraisana anjara amin'izany. [tohizo ny famakiana…]
Fanasana ho an'ny tanora handray anjara amin'ny fanadihadiana momba ny fandriam-pahalemana sy fiarovana ny mpianatra any Etazonia
Jona 10, 2021 0
Ny mpikaroka Cheryl Lynn Duckworth dia mitady mpianatra sekolim-panjakana amerikana (14-20 taona) izay te hizara ny heviny momba ny politika momba ny fandriam-pahalemana sy fandriam-pahalemana any amin'ny sekoliny ho an'ny fanadihadiana nasionaly izay mandray anjara amin'ny fanadihadiana mampihatra ny mason'antoka fiarovana ny olombelona amin'ny fahazoana sy famahana ny ady sy ny herisetra any an-tsekoly. Tafiditra ao anatin'izany ny politika toy ny fanazaran-tena ho an'ny mpitifitra, ny fampiasana ny tompon'andraikitra amin'ny sekoly (polisy) any an-tsekoly, ny mpampianatra fitaovam-piadiana, ny programa anti-bullying ary ny fanelanelanana / torohevitra ataon'ny namana. [tohizo ny famakiana…]